လက်တွဲခေါ်ဖို့လိုပါသည် … - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / လက်တွဲခေါ်ဖို့လိုပါသည် …
7:17:00 pm Myanmar Spirit
ယနေ့ ခေတ်မြန်မာလူငယ်များ အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုနယ်ပယ် (Competition Ground) သည် ယခင်ကထက် ပိုမိုကျယ်ပြန်လာနေပြီဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ အတန်းထဲမှာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ ပညာရေး နယ်ပယ်မှာ၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှာ စသည် စသည်ဖြင့် နေရာတစ်ခု ရဖို့၊ ဘဝတစ်ခု ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ ယှဉ်ပြိုင် နေကြရပါသည်။ ယခုအချိန်အတွင် မြန်မာလူငယ်များသည် ပြည်တွင်းတွင် သာမက နိုင်ငံတကာအထိ (အနည်းဆုံး အာဆီယံ) အဆင့်ကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြ ရပါသည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် ပြောရလျှင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ရာထူးကြီးကြီး တစ်ခုခေါ်သည် ဆိုကြပါစို့၊ ပြည်တွင်းမှ လူငယ် အချင်းချင်း သမက ပြည်ပမှ လူငယ်များဖြင့်ပါ ယှဉ်ပြိုင်နေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဘဝအောင်မြင်မှု အဆင့်မရောက်မီ ထိုသို့ လုပ်ငန်းနေရာ တစ်ခုရဖို့ အတွက်ပင် အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အစရှိသည်များ ပြည်စုံနေဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံဖို့ အတွက် မြန်မာလူငယ်အများစုမှာ ကျောင်းပြီးသည်နှင့် သင်တန်းမျိုးစုံကို တက်ကြရပြန်ပါသည်။ (ငယ်စဉ်ကတည်းက International School တွင် ကျောင်းတက်ကြသူများ၊ နိုင်ငံခြားတွင် ဘွဲ့ယူခဲ့ ကြသူများကို မဆိုလိုပါ) အဆိုပါ အရည်အချင်း၊ အရည်အသွေးများ ပြည့်စုံဖို့ရာ သင်တန်းမျိုးစုံ တက်နေရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ၊ မိမိဖြစ်ချင်သော ဘဝနှင့် ကိုက်ညီသော လိုအပ်သော သင်တန်းများကို တက်ရောက်သင့်သည်၊ မည်သို့ လျှောက်လှမ်းသင့်သည် စသည့် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန် ၊ လေ့လာ/ မှတ်သားရန်များ အတွေ့အကြုံများ လက်ဆင့်ကမ်းပေးမည့်၊ နည်းလမ်းပြပေးမည့်၊ လက်တွဲခေါ်ယူမည့် သူများလည်း လိုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ယနေ့ခေတ်မြန်မာ လူငယ်များကို စာရေးသူ အမျိုးအစားခွဲကြည့်သောအခါ အကြမ်းအားဖြင့် (၃) ခု တွေ့ရပါသည်။ Group A တွင် ပန်းတိုင်ကို ရောက်နေသူများ နှင့် ပန်းတိုင်လည်း သိသည်၊ သွားရမည့်လမ်းကိုလည်း သိသည်၊ ရည်သန်ရာ ပန်းတိုင်ကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင် အားသွန် ခွန်စိုက် လျှောက်လှမ်း နေကြသူများ ပါဝင်ပါသည်။ Group B တွင် ပါဝင်သော လူငယ်များသည် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေကြပါသည်၊ သင်တန်းများစွာ တက်နေကြသည်၊ ကြိုးစား အားထုတ်မှုလည်း ရှိကြပါသည်၊ သို့သော် တိကျသော ပန်းတိုင် မရှိပါ၊ သေချာသော လမ်းမရှိပါ (ဆိုလိုသည်မှာ နောင် ၅ နှစ် မှ ၁၀ နှစ်တွင် ဘာဖြစ်ရန် ဟူသော တိကျသော Target မရှိကြပါ၊ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပင်ပန်းနေကြသော်လည်း ၊ လေ့လာသင်ယူနေကြသော်လည်း တိကျသေချာသော အနာဂတ်ပန်းတိုင်မရှိကြပါ) Group C တွင် ဘာမှ ရေရေရာရာ/ သေသေချာချာ သိလည်း မသိ၊ လုပ်လည်း မလုပ်ဘဲ အချိန်ဖြုန်းကာ ဟေးလားဝါးလားဖြင့် မိဘကို ကပ်ချွဲကာ မုန့်ဖိုးတောင်းလိုက်၊ လျှောက်သွားလိုက် အစရှိသဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းနေကြသောသူများ ပါဝင်ပါသည်။
သို့ပါလျှင် မြန်မာလူငယ်များ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊ မည့်သည့် Group တွင်ပါဝင်နေပါသလဲ? Group A တွင် ပါဝင်နေလျှင် ဘာဆက်လုပ်လိုပါသလဲ? Group B တွင်ပါဝင်နေလျှင် ဘာဆက်လုပ်ပါမည်လဲ? Group C တွင် ပါဝင်နေလျှင် ဘာဆက်လုပ်ပါမည်လဲ? စသည့်မေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ကြ စေလိုပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းများကို စာရေးသူကိုယ်တိုင် လူငယ်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ကြိုးစား ဖြေကြည့်ပါမည်။ စာရေးသူ မည်သည့် Group တွင် ပါဝင်နေသည်ကိုတော့ မဖြေတော့ပါ၊ စာဖတ်သူကသာ ခန့်မှန်း ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါ၊ ဒုတိယမေးခွန်းက စတင်ကာ စာရေးသူအမြင်ကို ပြောလိုပါသည်။ Group A တွင် ပါဝင်နေသောသူများအဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ရည်မှန်းချက်လည်း ရှိသည်၊ လမ်းလည်း သိသည် အားသွန်ခွန်စိုက် လျှောက်လှမ်းနေကြသည့်အတွက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်မည့် အချိန်ကာလသာ လိုတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပန်းတိုင်ရောက်လို့ စတင်ရပ်တည် နိုင်သည့်အခါ Group B မှသူများကို လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံ၊ နည်းပညာ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံ၊ လျှောက်လှမ်း ခဲ့ရသော လမ်းများကို မျှဝေသင့်ပါသည်၊ လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။ လူငယ်များသည် အပြောထက် လက်တွေ့ကို ပိုမိုလက်ခံကြပါသည်။ “ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ ” ဟူသော စကားထက် “ငါလည်း ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်၊ မင်းတို့လည်း ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်” ဟူသော သဘောတရားကို ပိုမိုနှစ်သစ်ကြပါသည်။ အမှန်တကယ် နည်းလမ်းပေးကာ လက်တွဲခေါ်ယူကြလျှင် လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေကြသော လူငယ်များအတွက် လမ်းကြောင်းကိုလည်း တွေ့လာနိုင် ပါသည်၊ ပန်းတိုင်ကိုလည်း ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ Group B မှ Group C သို့လည်း ထိုနည်း အတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ အနုပညာ အစရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အောင်မြင် နေသော လူငယ်အများစုက လက်တွဲခေါ်နေကြပြီလား? ဒါကလည်း စဉ်းစားစရာပါ၊ လက်တွဲခေါ်တဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ မခေါ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေကြပါလိမ့်မည်။ လူဆိုတာက အတ္တသမားတွေဆိုတော့ ကိုယ့်ထက် သာမည်ကို စိုးရိမ်တတ် ကြပါသည်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း တော်နေ/ တတ်နေရုံဖြင့် ကျေနပ်ပြီလား? ကိုယ့်မိသားစု တစ်ခုတည်း ပြည့်စုံနေရုံနဲ့ ကျေနပ်ပြီလား? ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီလောက်နဲ့ ရပ်မထား စေချင်ပါ။ ကိုယ်သိသမျှ/ တတ်သမျှကို မျှဝေပေးကြစေလိုပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်အတွင် Group A ကလည်း သူ့အချင်းချင်း ပေါင်းသင်းကာ သူ့ Group နဲ့သူ ပျော်မွေ့နေကြကာ Group B ကလူတွေ က လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း သူတို့ကတော့ ကံကောင်းကြတော့၊ အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းကြတော့ စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု တပ်ကာ ဆက်ကြိုးစားဖို့ မစဉ်းစားတော့ဘဲ လက်လျှော့တာ၊ ကျေနပ်လိုက်ကြတာ မျိုးကို တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာရေးသူ အကြောင်း နည်းနည်း ပြောချင်ပါသည်၊ မချမ်းသာသော ပညာရေးဝန်ထမ်း မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားခဲ့သော စာရေးသူဟာ အဆင့်မြင့်မြင့် ကျောင်းတွေလည်း မတတ်ခဲ့ရပါ၊ တက္ကသိုလ် တက်တော့လည်း နိုင်ငံခြားမှာ မတတ်ခဲ့ရပါ၊ နိုင်ငံခြားက ဘွဲ့/ ဒီပလိုမာတွေကို ရယူဖို့လည်း ငွေးကြေးမတတ်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း ဆရာသမားကောင်းများရဲ့ လမ်းညွှန်ဆုံးမမှု အောက်မှာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးမှုနဲ့ မလျော့သော ဇွဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် မဟာရန်ကုန် ရွှေမြို့တော်မှာ နေရာလေး တစ်နေရာတော့ ရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စာရေးသူလို လူငယ်များကို တကယ် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ တကယ်ဆို စာရေးသူကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင် အပြည့်အဝ မရပ်တည်နိုင်သေးပါ၊ လုံးချာ/ ပတ်ချာလည်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း ရှိသလောက် နေ့မအား/ ညမနား သိသမျှ/ တတ်သမျှကို မျှဝေပေးနေပါသည်။ စာရေးသူ သတင်းစာ၊ စာစောင်တွေများ တွင် စာရေးလျှင် စာမူခ ရပါသည်၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တင်ပေးနေသည့် စာများအတွက် စာမူခမရသည့်အပြင် ဖုန်းဘေ(လ်) ကုန်ပါသေးသည်။ ဘာဖြစ်လို့ရေးနေလဲ? လူငယ်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နေကြတယ်၊ အကျိုးမရှိဘူး ဆိုတဲ့စကားတွေ ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာ အွန်လိုင်းကို အကျိုးရှိရှိ သုံးချင်တဲ့သူတွေ အတွက် ကွက်လပ်တစ်ခုဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် သင်တန်းတွေကို ရောက်နိုင်သူ လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်ဖို့ အတွက် ရေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူလို ရပ်တည်ရန်ကြိုးစားဆဲ လူငယ်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ကြိုးစား မျှဝေပေးနိုင်လျှင်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် စာရေးသူထက် အောင်မြင်နေကြသော၊ ရပ်တည်နေနိုင်ကြသော လူကြီး၊ လူငယ် အသီးသီးတို့ လည်း မျှဝေပေးလိုလျှင် ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ “လူငယ်တွေကို မကြိုးစားဘူး၊ အချိန်ဖြုန်းနေတယ်” စသည်ဖြင့် Negative ပြောမည့်အစား၊ ကိုယ့်အချင်းချင်း အဆင့်တူရာ/ တူရာကိုသာ အုပ်စုဖွဲ့နေမည့်အစား အပြုသဘောဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ လမ်းညွှန်မျှဝေ ပေးကြမည်ဆိုပါလျှင် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ယနေ့မြန်မာလူငယ်များ အားလုံး တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့်မြင့်သထက် မြင့်အောင် ကိုယ်တတ်စွမ်း သည့်ဖက်က လက်တွဲခေါ်ယူကြပါစို့ …
Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/470399943086799:0